ဂေး တို့၏မာယာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ​ဂေး တို့၏မာယာ
Posted by ရာမည on Aug 4, 2013 in Creative Writing | 30 comments
ကျွန်​​တော်​ယခု​ပြောချင်​တဲ့အ​ကြောင်းအ​ရာ​တွေဟာ မြန်​မာပြည်​တွင်း အ​နေအထားပါ ။
တိုင်းတပါးနဲ့နှိုင်းမရပါ ။အဲ့ဒါ ​လေး​တော့ နားလည်​​ပေးကြ​စေချင်​ပါတယ်​ ..။
ကျွန်​​တော်​တို့ နိုင်​ငံလူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာ အ​ခြောက်​လို့​ခေါ်တဲ့ မိန်းမလျာကို ​လျော့တွက်​ကြပါတယ်​ ။
တချို့က မိန်းမလျာကို တကယ့်​မိန်းမတစ်​​ယောက်​လို ​ပေါင်းသင်း ဆက်​ဆံကြတယ်​ ။ ယုံကြည်​ကြတယ်​ ။ အတွင်း​ရေး​တွေဖွင့်​ဟ တိုင်​ပင်​ကြတယ်​ ။
​ကောင်း​ကောင်းမွန်​မွန်​ လုပ်​ကိုင်​စား​သောက်​တဲ့ ဂုဏ်​သိက္ခာရှိအ​ခြောက်​လည်း ရှိပါတယ်​ ။ ဒါ​ပေသိ နည်းပါတယ်​ ။
အများအားဖြင့်​ ငါတို့က မိန်းမလျာ​တွေ
မိန်းမလိုအလုံးစုံ ပြုမူ​နေထိုင်​မယ်​ဆိုပြီး​ယောက်​ကျားရှာကြတယ်​ ။ပြဿနာက စပါ​တော့တယ်​ ။
ပြီး​တော့ သူတို့အ​ခြောက်​​တွေက အလွန်​ဘဲ စည်းလုံးကြပါတယ်​ ။မြန်​မာပြည်​တစ်​လွှား အဆက်​အသွယ်​ရှိကြတယ်​ ။ သူတို့အများစု ဆုံရပ်​က ​တောင်​ပြုန်းပွဲပါ ။
နတ်​လည်း ကတယ်​ ၊ လူ့​တော်​သလင်းပွဲလည်း ကျင်းပတယ်​ ။ ​ပြောရင်းနဲ့ လမ်းလွဲကုန်​ပါပြီ ။ ကျွန်​​တော်​တို့ ကြားဖူးမြင်​ဖူးတဲ့ အ​တွေ့အကြုံကို​ပြောရရင်​ အ​ခြောက်​တစ်​ဦးဟာ ရဇဝတ်​မှု ကျူးလွန်​ဖို့ ​တော်​​တော်​ လွယ်​ကူပါတယ်​ ။
ဘာလို့လဲဆိုရင်​ … အ​ခြောက်​အဖြစ်​အသွင်​ယူထားတယ်​ဆိုပါစို့ …
လူ​တွေက​လျော့တွက်​တယ်​ ။ တကယ်​​တော့ သူ့မှာ ​ယောက်​ကျားတစ်​​ယောက်​လိုသန်​မာပါတယ်​ ။ ဓားနဲ့လည်းထိုးရဲပါတယ်​ ဓား​ထောက်​ပြီးလည်း လုနိုင်​ပါတယ်​ ။
​ပြောလိုတာက အထင်​မ​သေးပါနဲ့ ။ ​နောက်​ထပ်​ဘာ​တွေလုပ်​နိုင်​သလဲဆိုရင်​
ပြည့်​တန်​ဆာ ​ခေါင်း အဖြစ်​​ကောင်း​ကောင်း လုပ်​နိုင်​ပါတယ်​ ။
အ​ခြောက်​ဆို​တော့ တချို့မိန်းမ​တွေက အကပ်​ခံပါတယ်​ ။မိန်းမချင်းလို့ မှတ်​ယူပြီးသကာလ အတွင်း​ရေး​တွေ​ပြော၊တိုင်​ပင်​နဲ့ ​နောက်​ဆုံး
ပြည့်​တန်​ဆာအဖြစ်​ မြှူဆွယ်​ ခံရတာပါ ။ သူတို့ကိုယ်​တိုင်​လည်း ပြည်​တန်​ဆာတစ်​ပိုင်း လုပ်​​နေတတ်​ပါတယ်​ ။
ရီစရာအ​နေနဲ့ ​ပြောရရင်​ ​ဈေး​လျော့ယူလို့ ပြည့်​တန်​ဆာ မိန်းမများက အမုန်းပွားပါသတဲ့
ရာဇဝတ်​မှု​တွေ​ထဲက နည်း​နည်း​ပြောမယ်​ဆိုရင်​ … ၁၉၉၀ ဝန်းကျင်​မှာ ပဲခူးတိုင်း ပဲခူးမြို့ ဆိုရှယ်​လစ်​ရပ်​ကွက်​ထဲက ညအချိန်​လုယက်​မှုဟာ အ​ခြောက်​မ ဦး​ဆောင်​တာပါ။
၁၉၉၁ ခုနှစ်​ ၂အစုန်​ မီးရထား​ပေါ်က အလစ်​သုတ်​ ခါးပိုက်​နှိုက်​တာ အ​ခြောက်​အသွင်​ယူလှုပ်​ရှားတာပါ ။
၁၉၉၀ – ၁၉၉၁ တဝိုက်​မှာပဲ ဘိုး​တော်​​တွေ နတ်​က​တော်​​တွေ ဥုံဖွ ​တွေ​ခေတ်​စား​လာ​တော့ ချဲဂဏန်း​ပေးပြီးလိမ်​လည်​တာ အ​ခြောက်​နတ်​က​တော်​​တွေပါ ။
ဗဟုသုတနည်းတဲ့သူ​တွေကို သိုက်​ကလာတာဆိုပြီး ချိန်း​ခြောက်​ ​မြှောက်​ပင့်​လို့ သိုက်​ကြိုးဖြတ်​မဟဲ့လို့ လိမ်​လည်​တာ အ​ခြောက်​နတ်​က​တော်​​တွေပါ ။
အလှပြင်​ဆိုင်​အသွင်​ယူပြီး ​ဘောစိ​တွေကို လိုက်​ပွဲရှာ​ပေးတာ…..
အားနာတတ်​တဲ့ မိန်းက​လေး​တွေလာပြင်​ရင်​ ဟိုကိုင်​ ဒီကိုင်​ ကိုင်​တတ်​တာ …..
လိင်​လုပ်​သား ​လောကမှာလည်း လယ်​တစ်​ကွက်​နဲ့အမှန်​အကန်​ရင်းစားသူ​တွေကို ပုံမှားရိုက်​​ဈေးဖျက်တာ……
အနုကြမ်းစီး ​ဖောက်​ထွင်းမှု​တွေမှာ လက်​​ထောက်​ချသတင်း​ပေးလုပ်​​ပေးကြတာ …(အားလုံးကိုမဆိုလို ပါ ။ရှိခဲ့ဖူးလို့)
ဒါ​တွေ​ပြော​နေရင်​ ​ဒေါ​တွေပါ​နေလိမ့်​မယ်​ ။ ဖြစ်​စဉ်​​မြောက်​များစွာထဲက ဥပမာအနည်းငယ်​ပါ ။
ယုံကြည်​မှု မလွန်​​စေဖို့ သတိ​ပေးချင်​လို့ပါ။ အသွင်​ယူလှုပ်​ရှားလို့ရတဲ့ အ​ကောင်းဆုံးဇတ်​​ကောင်​ ဖြစ်​​နေပါတယ်​ ။
အလွန်​မအားလပ်​သည့်​ကြားမှ​ရေးရသည်​ဖြစ်​၍ မပြည့်​စုံခဲ့ပါ ။
Reply မလုပ်​ ဖြစ်​ခဲ့သည်​များရှိပါက ခွင့်​လွှတ်​ပါရန်​
​ဂေး တိုင်းကိုမဆိုလို​​သေည်​လည်း ​ဂေး​တွေထဲကဖြစ်​ရပ်​​တချို့ပါ
ကိုရာမညရေ အဲ့ဒီလိုအခြောက်တွေကိုကျနော်တို့က …စမူဆာ… လို့ခေါ်တယ်ဗျို…
ပင်လယ်နှင့် တူသော ယောကျာ်း တစ်ယောက် says:
ဂေးတို့ အိမာယာ ဖတ်ပြီး
ဂေးတွေ ကို သတ်ိထား ရမယ့် အချက်လေးတွေ သိရလို့ အကျိုးရှိပါကြောင်းးး
မကြာသေးခင် က ပဲ
တွဲလာတာ ကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ သူငယ်ကမိန်းမ ယူသွားလို့ 
အဲဒိ သူငယ်ကို သတ်လိုက်တဲ့ ဂေးတစ်ယောက်ရဲ့
အခြောက်ဆို တားတား ကြောက်ကြောက်ပဲ ….
ညတိုင်း အလုပ်ပြန်ရင် အခြောက်တွေနဲ့ တိုးတတ်တယ် …
ဒီအခါ သူတို့ ဘာပြောပြော ခပ်တည်တည်နဲ့ ဒိုးရတယ် …
ဟူးးး လွယ်ဝူးရယ် ….
သူတို့ လက်တွင်း ကျရောက်သွားလို့ကတော့ …
ဟီးးးး မတွေးရဲစရာဂျီးဘဲ … ဟီးးးဟီးးး
ခညားက အခြောက် အကြောင်းဒွေ ဂလောက် လေ့လာထားဒေါ့ ..
ခညားကရော .. အင်းး အဲ … လား .. အင်း … အဲ …
(ဘာမွှ မီဟုတ်ဝူးးး နောက်ဒါဘာ ကိုကိုရဲဂျီးရယ် .. နော်လို့)
ဒါသည်သာ ဂေးတို့၏ မာယာ
ရှိသမျှ ဂျူး ဝတ္ထုခေါင်းစဉ်လဲ ကုန်ပလားမသိ ဟီဟိ
ဟိုတစ်ကောင်ကလဲ ပင်လယ်နှင့်တူသော ယောက်ျားတစ်ယောက် တဲ့
ဒီကလဲ ဂေးတို့၏ မာယာ တဲ့
ပြေးပြီနော်လို့ မပြောလိုက်ဖူး တို့
ကြာတော့သည်လဲ ကြောင့်စကား တို့
ကြာတော့..သည်လည်း..မောင် အလကား…တို့ …
သများ ချော်ဒကစ်သော..သူငယ်လေးများ..တို့ ..
မလျှာလောကမှာ….သများကို ထားရစ်ခဲ့တို့ …
အချော်ဒကစ်ကြောင့်ြ့ဖစ်သော စော်တကစ် ပွဲများ..တို့ …
အခြောက်မ တစ်ယောက် ၏ ဖွင့်ဟ ၀န်ခံချက်…တို့ …
ကျွန်​မ၏ ငုတ်​တို …လုိ့
ဟီ ဟိ ။ သားသား လေ ။ သားသား ။
အဲဒီ သူဂျီး ပြောတဲ့ L နှင့်စတဲ့ ဟာလေးကို စားဖူးတယ် ။ တိလား ။
မနဲ ကြိုးစားခဲ့ရတယ် ။ သိပ်တော့ မစွံပါဘူးကွယ် ။ Frigid ကြီး ။ ဟီ ဟိ ။
သူက ပြောသွားသေးတယ် ၊ သူ့ Partner သာသိသွားရင် ၂ ယောက်လုံးကို သတ်မှာတဲ့ ။
ဒါနှင့်ပဲ ။ နောက် မ တစ်ခါရဲတော့ဘူး ။ ဟီ ဟိ ။
ဟီးး အဘတို့ပဲ လုပ်ကြဘာဗျာ… ဟီးး
G ဘုန်းတွေကို မုန်းပေမဲ့.. L နဲ့ မီးသားလေးတွေကို သိပ်ဂျစ်တာ..။
ဆပ်ဆလူးခါနေတဲ့ဘ၀မှာလေ.. တားဂတော့.. G အစ L အဆုံး
နေရှင်နယ်ကတော့… A – Z မခွဲခြားခဲ့ပါဘူး..။ ရေကြောင်းစိတ်အပြည့်ရှိပါတယ်… ငိငိ
အယ်လ်လေးတွေကိုတော့ ခွေးလွှတ်တယ်…။ သူတို့ခမျာ ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်ကြပါတယ်ကွယ် ကြည့်လို့တယ်ကောင်း… အခွေကြည့်ဖူးတာ..။ ဂေးတွေနဲ့တော့ကွာပါ… တခါတလေ ပွန်းဆိုက်တက်လို့ ဂေးဆိုက်ထဲရောက်သွားရင် ဝေါ့….
BIG BIG Discrimination !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
တစ်လေသံထဲ ထွက်လို့။ ညီနေတာဘဲ။
ထင်သားဘဲ။ ဒီလို လေသံ ထွက်ကြမယ် ဆိုတာကို။
ကိုရင်စံကြီး ရေ။ လာပါဦးဟေ့။ ဒီမှာ တစ်မျိုး။
ကျုပ်အဖွား မြို့လေးနားက ရွာတစ်ရွာ မှာ
မိန်းမ က ကျား စိတ်ပေါက်၊ ယောကျာင်္းက မ စိတ်ပေါက် သူတို့ ယူထားကြတာ။
မိန်းမ စိတ်ပေါက်နေတဲ့ ကျားကြီး က အိမ်မှာ ထမင်းချက်၊
ကျားစိတ်ပေါက် နေတဲ့ မကြီး က လယ်လုပ်၊ ထန်းတက်။
ကလေးမွေးပြီး တော့ ကျားကြီး က ကလေးထိန်း။ ဟုတ်နေတာပါဘဲ။
မိန်းမ က ယောက်ျား စိတ်ပေါက်နေသူကို တွေ့ ရင်..
ကျွန်တော်တို့ယောက်ျား အစစ်တွေ ထက်တောင်…
ကျားကျားလျားလျား ပုံစံ လုပ်ပြတတ်သေး…
လမ်းလျှောက်တာကို က..ကားတားကားတားနဲ့ …
လာ​စေချင်​လျှင်​ လာပါမယ်​ ဦး​လေးခိုင်​
ရွာ ကိုဝိုင်း​ဆော်​ရင်​​တော့ ကျွန်​​တော်​မသိဘူး​နော်​
ဒီမှာလဲ ဂေးဒါဏ်ရာ နဲ့ သူတစ်ဦး ထင်ရဲ့။
အမှုတွေ ရှုပ်လွန်းအားကြီးလို့ စိတ်တိုနေသလားဘဲ။
လဲ နေတာ တွေ့ရင်တော့ (နီးရာ အဖော် ခေါ်ပြီး) ထူပေးလိုက်ပါ ကိုရာ ရယ်။
ကျွန်​​တော့်​ပို့စ်​မှာ လာ​ရောက်​ ကွန်​မန့်​​ချီးမြှင့်​​ပေး​သည့်​
အရီး​ဒေါ်ခင်​လတ်​ တို့အား ​အလွန်​​ကျေးဇူးတင်​ပါ​ကြောင်း ….
ကျွန်​​တော့ အ​နေနှင့်​ အဆိုပါ​ဂေး များအား မုန်း၍မဟုတ်​ပါ​ကြောင်း ….
မြှူဆွယ်​သွတ်​သွင်းခြင်းများ မလုပ်​​စေချင်​ပါ​ကြောင်း နှင့်​
ဇတ်​ရုပ်​အသွင်​ယူ၍ ရာဇဝတ်​မှုကျူးလွန်​တတ်​သည်​ကို သတိထား​စေချင်​ပါ​ကြောင်း…..
​နောင်​အခါအလျင်းသင့်​ပါက ဆက်​ ဖြစ်​ရပ်​မှန်​များကို ဝတ္ထုသဖွယ်​ တင်​ပြပါမည့်​အ​ကြောင်း…
ကိုရင် ရာမည ပြောသွားတဲ့ ဂေး တွေက သရုပ်ပျက် ဂေးအမျိုးအစားတွေဆိုတာ နားလည်ပါတယ်..။
အဲသည် ဂေး တွေဟာ သာမန်ထက် ရဲတင်းလွန်းပြီး ရာဇ၀တ်မှု့ အလွယ်တကူ ကျူးလွန်နိုင်တယ်ဆိုတာလဲ ကိုယ်တွေ့ ကြုံဖူးပါတယ်။
သူတို့ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ ရာဇ၀တ်မှု့ တမျိုးကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး လက်လီ ဖြန့်ဖြူးတာပါ…။
သူတို့အချင်းချင်းကြားမှာ ဆက်သွယ်ရှာဖွေ ၀ယ်ယူရတာလဲ လွယ်ကူပုံရပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သုံးဆယ်လောက်တုန်းက ရန်ကုန်မှာ ရိုးရိုးလူစိမ်းတစ်ယောက်အဖို့ ဘိန်းဖြူဝယ်ဖို့ အင်မတန် ခက်ခဲပါတယ်..။
အဲဒါ .. တစ်နေ့တော့
အဆောင်ကျောင်းသားတစ်ယောက် လက်ဆော့ပြီးဘိန်းဖြူကိုစမ်းကြည့်ချင်တာနဲ့ သူ့ကိုကပ်နေတဲ့ ဂေး ကို ပြောတော့
နာရီပိုင်းအတွင်း ယူလာပေးတာ ကိုယ်တိုင် မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ဖူးပါတယ်။
(တကယ် ဘိန်းဖြူအစစ် ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိပါ)
မိန်းခလေးတွေ ဘတ်စ်ကားစီးရင် နှမခြင်းမစာနာတဲ့ ငထောက်တွေရန် ကြောက်ရသတဲ့၊
ယောက်ျားလေးတွေကြတော့ အဲသည့် ၆မတွေ လက်သရမ်းတာ ခံရတယ်…
အနှီ မောင်မစ္စကများ အကြောင်းကတော့ မရိုးနိုင်ဘူး…
ဂေးတို့၏ တစ်ဆန်းချိန် ဆိုသလို ရွာထဲ ဂေးပိုစ့်တွေ အခုတလောဖတ်နေရပါ၏။
သြော် အလှမရွှေးတဲ့ ကနွဲကယ လှသွေးချယ်ရာ ဂေး တို့ မာယာပေါ့။
မှတ်ထားလိုက်ပါတယ် ဦးဦးရဲ အဲ ဦးဦးရာ ရေ…
အဲ…အနော်က ယောက်ျားလေး နွဲ့နွဲ့လေးတွေ (ဟိုလိုမျိုး အလှတွေပြင်ထားတာ မဟုတ်ဘဲ) ဆိုရင် ချစ်ချာလေးဆိုပြီး လိုက်ကြည့်တတ်တယ်..
အရင်တုန်းက အခြောက်ဆိုလျှင် … ဘာရွံသလဲ မမေးနဲ့ … ။
မြင်ရုံနဲ့တင် ရင်ထဲ ကျလိကျလိနဲ့ … နှာခေါင်းရှုံ့မိတယ် … ။ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း အသားရေပေါ်မှာ ချောကလက်မှိုတက်တာထက်ဆိုးတဲ့ မိတ်ကပ်အပြင်ဆင် ခြယ်သမှုရယ် … ၊ အပေါစား ပေါင်ဒါနံ့၊ ရေမွှေးနံ့ ကလည်း ခပ်ပြင်းပြင်း ချွေးနံ့ ကို ဖုံးဖိဖို့ သုံးထားရသေးတယ် … ။
အ၀တ်စား ပြင်ဆင်မှု အပိုင်းမှာလည်း ယောကျာ်းအရိုးဆစ်တွေနဲ့ မိန်းမ အရိုးဆစ် အနေထား ကွာတာကြောင့် ၊ ဘယ်လိုပဲ လိုက်ဝတ်ဝတ် .. မြင်ရတာ ထော်လော်ကန့်လန့်နဲ့ …. ။
ဆင်ခြေထောက်လောက်တွေနဲ့ ….ဒေါက်ဖိနပ်စီးထားပုံများ မြင်ရတာ အတော်လေး ကသိကအောက်ဖြစ်ခဲ့တယ် …. ။ ကနွဲ့ကလျ အမူယာတွေကလည်း မတူတူအောင် လိုက်လုပ်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုမှလည်း မတူဘူး … ။ မိန်းမတွေလို ပတ်ချွဲနပ်ချွဲ အသံထုတ်ချွဲလျှင်ဖြင့် အသံပြာကြီး တဗြဲဗြဲနဲ့ … အိုးးးးးးးးး ဘယ်လိုမှ ခံစားလို့ကို မရ …ကိုယ်ချင်းစာလို့မရ … နားလည်ပေးလို့ မရ … ။ တော်တော့ကို မျက်စိနောက်တဲ့ ဖီလင်မျိုးပဲ ….လင်လိုချင်တဲ့ အခြောက်မတွေကို အလကားနေရင်းကို မျက်မုန်းကျိုးနေမိတာ ။
နောက်ပိုင်းခေတ်ပြောင်းလာတယ် …. အရင်လို အခြောက်တွေက .. ညစ်တီးညစ်ပတ်ချွေးစော်နံတာတွေ မဟုတ်ပဲ … လှလာ ပလာကြတယ် .. တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး ဂရုစိုက်ပြီး ၊ အမှတ်တမဲ့ကြည့်လျှင် အခြောက်မှန်း မသိသာလောက်အောင်ပဲ တူလာကြတယ် … ။ ဒီအချိန် သူတို့ကို ကြည့်တဲ့အကြည့် စပြောင်းစ ပြုလာခဲ့ပါပြီ … ။ ရွံ့ ရှာတဲ့ဖီလင်မျိုးတော့ မဟုတ်ပဲ ….. သူ့အကြောင်းနဲ့ပါလားလို့ တွေးရင်း … မြင်လည်း ကြည့်လိုက်တာပဲ ။ မိတ်ကပ်ဖန်တီးရှင် ၊ ဆံပင်ပညာရှင် အခြောက်တွေနဲ့ တွေ့လျှင်လည်း … ပုံမှန်အတိုင်းပြောဆိုမိတာပါပဲ ။
သူတို့ စားကျက်ရှာတာတွေ ဘာတွေ ကြားဖူးပေမယ့် .. တချို့အခြောက်တွေက … ကံကံဧ။် အကျိုးကြောင့် ခြောက်လာကြတာလို့ ယုံကြည်မိပါတယ် ။ တချို့ကလည်း စားပေါက်ချောင်လို့ တမင်ခြောက်နေကြတာတွေလည်း ရှိတယ် …။ … လိင်ကိစ္စအရှုပ်ရှင်း မရှိတဲ့ အနေထားမျိုးတွေလည်း ရှိတယ် … ။
အခုတော့ အခြောက်တွေ အပေါ် ထားတဲ့ အမြင်က ၊ မျက်မုန်းကျိုးတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး ၊ သဘောကျတယ် ဆိုတာလည်းမရှိဘူး …. ။ ကိုယ်နဲ့ အလုပ်သဘောအရ ပတ်သတ်ဆက်နွယ်ရမယ့် အနေထားမျိုးရှိလျှင် လူတယောက်အနေနဲ့ပဲ ပြောဆို ဆက်ဆံပေးလိုက်တယ် ….. ။ ကျန်တဲ့ သူ့ရဲ့ ပုံပန်းသွင်ပြင် စိတ်နေစိတ်ထားကိုတော့ …. ဥပက္ခာပြုထားလိုက်ပါတယ် ။
နိုင်ငံခြားသား သတင်းထောက် တစ်ယောက် မြန်မာပြည်က တောင်ပြုံးပွဲရောက်တော့ သူတော်တော်လေး အံသြသွားတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဂေး လွတ်လပ်ခွင့် အရှိဆုံးက မြန်မာ နိုင်ငံလို့ ထင်တဲ့ အကြောင်းတောင် သူက မှတ်ချက်ပေးသွားသတဲ့..။
ကိုအာဂ… ဒါဆို နောက်တချိန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တောင်ပြုံးပွဲတွေ
ဪ။ အဲဒီတုန်း က လူလူချင်း ခွဲခြားချင်စိတ်မရှိလို မမန့်တောင် မမန့်ခဲ့ပါဘူးးး
ခုတော့ သူတို့ မာယာတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်လိုက်ပါပြီလေ။
အောင်မငှီး အဲလောက်တောင် ကြီးသလား…
ညှင့် – များဂို – များဂို –
တွား လူဇိုး ဒီက အကောင်းမှတ်လို့ ဟှင့်
မြွှေဟောက်နှင့်တူသော အခြောက်များ ကိုစောင့်မျှော်အားပေးပါ့မယ်ဗျာ